अनिल शर्मा – Page3– eratokhabar
२०७४, ३ फागुन बिहीबार ०६:१४
अरुण तस्रो परियोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने सरकारी सहमती छ । जसका लागि अनुमानित लागत प्रतिमेगावाट ३५ सय अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको देखिन्छ । २०५० साल आसपासमा नै त्यो लागत दर १२ सय डलर गरिएको थियो । भनिन्छ तत्कालिन नेपाली…
२०७४, २६ पुस बुधबार १२:४३
वस्तुुको मूल्याङ्कन ‘भौतिक परिस्थिति र काल’ को आधारमा गरिनिुपर्दछ । अन्यथा हरेक पुस्ताले अग्रजलाई धारेहात लगाउ“दै हि“ड्ने प्रक्रिया चल्नेछ । न्यायशास्त्रमा कानुनवेत्ताहरूले कुनै घटना हुनासाथ घटनाका कारण कसलाई फाइदा भयो ? भन्ने कोणबाट अनुसन्धान सुरु गर्छन् । नेपालको एकीकरणले नेपालीलाई…
२०७४, १८ साउन बुधबार ००:१४
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणना विवादको पटाक्षेप धेरै अर्थ बोकेर समाप्त भएको छ । चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको गृहजिल्ला हो । जहाँ आफ्नै पार्टीभित्र लामो समयदेखिको षड्यन्त्रपछि दाहालकै छोरी रेणु दाहाललाई मेयरको पदमा उठाइएको थियो ।…
२०७४, २५ असार आइतबार ०५:०९
प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनलाई धेरैले पतनको यात्रामा रुपमा व्याख्या गरेका छन् , मुलतः वामपन्थी कोणबाट । तर लोकराज बरालजस्ता विश्लेषकले भने प्रचण्डको गुणगान र महिमा गाउन थालेका छन् । जनयुद्ध र प्रचण्डविरुद्ध चौतर्फी प्रहार गर्दै आएका घरानाका संचार एकाएक मौन भएका छन्…
२०७३, २६ साउन बुधबार १२:२२
सन् १९६२ मा चीन र भारतका बीचमा युद्द भयो । त्यसका लागि केहि वर्ष अघिदेखी भएका हर्कतले युद्धको अवश्यम्भाविता देखिएको थियो । तत्कालिन रुस र अमेरिका दुवैले धाप मारेका कारण भारतले चीनका विरुद्ध युद्धको तयारी गरेको थियो । चीनले पनि…